पुजिपतीहरुको घेराबन्दीबाट बाहिर ननिस्के बिद्यार्थी आन्दोलन कम्जोर हुदै जाने निश्चित
प्रकासित मिति : २३ फाल्गुन २०७६, शुक्रबार प्रकासित समय : २२:१६
नेता- कृष्ण प्रसाद रिजाल
पुजीपतीहरुको घेराबन्दी बाट बाहिर ननिस्के सम्म बिद्यार्थी आन्दोलन कम्जोर हुदै जाने निश्चित देखिएकाे छ। बिद्यार्थी नेता कार्यकर्ताहरु स्वबियु निर्वाचनमा भाग लिएर मात्र बिद्यार्थी को नेतृत्व गर्न सक्छन् ! स्वबियुमा भाग नलिइ विद्यार्थीको नेतृत्वमा पुगेका नेता कार्यकर्ताहरु कच्चा नेता कार्यकर्ता हुन नेतृत्व हुन सक्दैनन्।
दुई दुई बर्ष मा हुन पर्ने स्वबियु निर्वाचन आज ११ बर्ष सम्म किन हुँदैन ? विद्यार्थी संघ संगठनमा डनवाद र धनवाद हाबी हुदा बिद्यार्थी आन्दोलन कमजोर हुँदै गएको देखिन्छ !पार्टीहरु जस्तै विद्यार्थी संघ संगठनहरु पनि पुजिपतिहरुको घेराबन्दीमा परिसकेका छ्न ।
हिजो र आजमा खासै फरक देखिदैन हिजो सामन्ती जमिनदारहरुको हालीमुहाली हुन्थ्यो अहिले पुजिपतीहरु र तेस्का वरिपरि छ्त्रछाया रहनेहरु को छ।
डनवाद र धनवादको अन्त्य र पुजिपतीहरुको घेराबन्दी बाट बाहिर ननिस्के सम्म बिद्यार्थी आन्दोलन कम्जोर नै रहने छ र हामिले थप उपलब्धिहरु हासिल गर्न सक्दैनौं ! केहि मान्छेको जिन्दगी त फेरिएला तर समग्र विद्यार्थी आन्दोलन कम्जोर र बिद्यार्थीहरुको भबिस्य अन्धकार हुनेछ ।